१३ साउन, काठमाडौं । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत राकेश सूदले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढाएको बताएका छन् । नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग र सहकार्यलाई छाडेर सूद नेपालको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनतर्फ लागेको यादवको आरोप छ । भारतका पूर्वराजदूत सूदले हालै एक लेखमा भारतले नेपाललाई यति धेरै...
इद उल फित्रका अबसरमा काठमाडौँको घण्टाघरमा रहेको जामे मस्जितमा प्रार्थना गर्दै मुस्लिम धर्मावलम्बीहरु । तस्वीर : विकाश श्रेष्ठ/अनलाइनखबर
पीजे क्लबको अायोजनामा राजधानीमा चलिरहेको फोटो प्रदर्शनीमा राखिएका तस्वीर अबलोकन गर्दै मोर्गन इन्टरनेश्नल कलेज बसुन्धाराका विद्यार्थीहरु । तस्वीर : अनलाइनखबर
साउनको दोस्रो सोमवार पशुपति मन्दिरमा महादेवको पूजा गरेपछि ध्यानमग्न भएर प्रार्थना गर्दै एक युवती । तस्वीर : विकाश श्रेष्ठ/अनलाइनखबर
पशुपति मन्दिरको दर्शन गर्नका लागि सोमवार विहान लाइनमा बसेका दर्शनार्थी । तस्वीर : अजय महर्जन/अनलाइनखबर
राप्ती अञ्चलको द्धार मानिने कोईलाबासको जीर्ण प्रहरी चौकी, मर्मत नहुँदा यो भवन प्रयोग बिहीन भएको छ । तस्वीरः निमुसंगम घर्ती
११ सय पृष्ठको रातो किताब कसरी पढ्लान् सभासदले ? १३ साउन, काठमाडौं । दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकको अभाव भएको समाचार सामान्य हुने गरेको छ । तर, संविधान, कानून र बजेट पारित गर्ने सभासदहरुले...
१३ साउन, काठमाडौं । सरकारले बौद्ध गुरु श्यामार रिम्पोचेको शब नेपाल ल्याउन अनुमति दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बौद्ध गुरु...
नेपालसँग बढी सामीप्य हुन नखोज नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध एकातर्फ भारतीय पक्षको संवेदनहीनता र बेवास्ता तथा अर्कोतर्फ नेपाली पक्षको अतिसंवेदनशीलता र भ्रमित हुने बानीका कारण निरन्तररुपमा बिगि्रने गरेको छ...
बजाजको नयाँ डिस्कभर बजारमा, माइलेज ७६ किलोमिटर
साहरुख, आमिरलाई पछ्याउँदै ‘ताण्डव’को भिडियो खेल
कलाकारको गोजीमा ‘एनसेल’को महंगो कार्ड, रातभरी नसुती आफ्नै गीत डाउनलोड
एयर एशिया लगातार छैटौं बर्ष ‘बिश्वको उत्कृष्ट बजेट एयरलाइन्स’
१३ साउन, धादिङ । सदरमुकामस्थित नीलकण्ठ नगरपालिका- ३ की एक महिलालाई उनका श्रीमानले कुटपिट गरी नाङ्गै पारेर घर निकाला गरेका छन् । उत्तरी धादिङको...
१३ साउन, काठमाडौँ । विद्यालय शान्ति क्षेत्रको निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि विद्यालय बन्दका घटना कम हुँदै गएको पाइएको छ । निर्देशिका आइसकेपछि विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर...
१३ साउन, भक्तपुर । केही महिनाअघि सम्म रगत नपाए भक्तपुर जानु भन्ने कथन बोकेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुर शाखाअन्तर्गत रक्तसञ्चार केन्द्रमा रगतको चरम अभाव...
चार वर्षदेखि बिपी प्रतिष्ठानमा न्युरो सर्जरी सेवा सञ्चालनमा
१३ साउन, सुनसरी । धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विशिष्ट सेवा विस्तारका क्रममा न्युरो सर्जरी सेवासम्बन्धी आकस्मिक तथा नियमित सम्पूर्ण सेवा सञ्चालन प्रारम्भ...
एमाले अध्यक्ष ओली स्वदेश फर्किँदै
सारा नेता जंगल पसे पार्टी खोल्नेबारे सोच्छु : कटवाल
रामचन्द्र प्यासीको रिहाइको निवेदन खारेज
सुष्मा स्वराजलाई गुहारिएको भन्दै संसदमा आपत्ति
मकैबालीमा डाँठ कुहिने रोग देखियो
१३ साउन, काठमाडौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका विषयमा छलफल गर्न प्रमुख तीन दलको बैठक बस्दैछ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा साँझ...
१३ साउन, दाङ । मेहेनत गर्न सके घरमै मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् दाङका एक किसान दम्पत्ति । कमाईका लागि परिवारबाट...
१३ साउन, काठमाडौ । गत असार महिनामा मात्रै ३८३ महिलामाथि विभिन्न प्रकारका हिंसाका घटना भएका छन् । महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक)मा दर्ता भएका र...
१३ साउन, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बस्दैछ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने विहान ११ बजेपछि बस्ने बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको...
न्यायाधीशको चाहनामा सभामुखको अंकुश
मोदीसँग भेटवार्ता गर्न इच्छुक छौं : बैद्य माओवादी
खुफिया पीडित नेपाली नेताले मोदीसँग के माग्लान् ?
एमाले अध्यक्ष ओली भोलि स्वदेश फर्किने
भारतमा पहिरोले पुरिएर एक नेपालीको मृत्यु, एक घाइते
विमानको चक्कामा आगो लाग्यो
स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताका लागि असंख्य एप्स उपलब्ध छन् । ती मध्ये कतिपय अत्यधिक कामलाग्ने तथा ज्ञानमूलक छन् भने कतिपय बेकम्मा र फन्टुस पनि । कतिपय गेमिङ एपले तपाइँलाई मूर्ख पनि बनाउन सक्छन् । तर अब यस्तो एप आएको छ, जसले तपाइँका लागि यौनसाथी खोज्न सहयोग गर्नेछ । मोबाइल फोनबाटै सहवासको
बिक्यू मोबाइल किटक्याट भर्सनमा, मूल्य ७ हजार
११ साउन, काठमाडौं । होराइजन इन्टरप्राइजेजले किटक्याट अपरेटिङ सिस्टममा चल्ने बिक्यूको ‘एस ३७’ स्मार्टफोन बजारमा ल्याएको छ । यसअघि...
१० साउन, काठमाडौं । भारतीय सरकारी अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमणलाई चीनसँग पनि जोडेर कतिपय भारतीय विश्लेषकले दुई देशको सम्बन्धमा उत्तरी...
बिजनेस एयर एशिया लगातार छैटौं बर्ष ‘बिश्वको उत्कृष्ट बजेट एयरलाइन्स’
१३ साउन, काठमाडौ । मलेसियाली बजेट एयरलाइन्स ‘एयर एशिया’ले सन् २०१४को उत्कृष्ट बजेट एयरलाइन्सको उपाधि जितेको छ । एयर एशियाले यो उपाधि लगातार छैटौं बर्ष हात पारेको हो । सन् २०१४को १० महिनाको अबधिमा बिश्वका २४५ एयरलाइन्समा यात्रा गर्ने करिव १ करोड ८० लाख यात्रुमाझ गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा यो उपाधि प्रदान गरिएको हो । हालै ...
१३ साउन, काठमाडौं । गाउँ पर्यटन प्रवर्द्दन मञ्च (भिटोफ) नेपालमा नयाँ नेतृत्वका लागि चुनावी सरगर्मी शुरू भएको छ । बिहीबारबाट काठमाडौंमा शुरू हुने भिटोफ नेपालको को १८ औं वार्षिक साधारणसभाबाट नयाँ नेतृत्व
१३ साउन काठमाडौं । दोलखामा प्रधान कार्यालय रहेको क्षेत्रीयस्तरको कालिञ्चोक डेभलपमेन्ट बैंकले आगामी साउन २१ ग्तेदेखि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता सय रुपैयाँ अंकित
ग्लोबलको नाफा एक अर्ब बढी, रातमाटेमा शाखारहित सेवा
सुन तोलामा सय रुपैयाँ घट्यो
मुक्तिनाथ विकास बैंकको नाफा १५ करोड १९ लाख
१३ साउन, काठमाडौं । भारतिय मोटरसाइकल निर्माता कम्पनी बजाजको नयाँ डिस्कभर नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । बजाजको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता एचएच बजाजले १२५ सीसीको डिस्कभर सोमबार राजधानीमा सार्वजनिक...
बलिउडमा सिनेमाको प्रचारका लागि चर्चित नायक तथा निर्माताहरु भिडियो गेमको निर्माण गरिरहेका छन् । नायक साहरुख खानले ‘चेन्नई एक्सप्रेस’मा र आमिर खानले ‘धुम ३’मा...
यतिबेला नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका कलाकारहरुले नयाँ उपाय खोजी गरेका छन् । एनसेल मोबाइलमा रातभरी नसुती आफ्नै गीत बारम्बार डाउनलोड गर्ने काम नै सुरु भएको...
अनुको साउने कुरा, श्रीमानका लागि हैन हरियो चुरा
पानीमा रुझेकी शिल्पालाई देखेपछि आर्यनलाई के भयो ?(भिडियो)
जीवन छन्, कथा दरिलो छ, डराउने कोसँग ?
बलिउडमा मसलेदार सिनेमा बनाउन माहिर मानिएका निर्देशक रोहित सेट्टी अगष्ट १५ मा ‘सिंघम रिटन्स’ मार्फत दर्शकमाँझ आउँदैछन् । चलचित्रमा अजय देवगन र करिना कपुर...
नायक सलमान खान र उनको बिहेको बिषयमा सधै नै चर्चा भैरहन्छ । ४८ बर्षको उमेरमा समेत सलमानले बिहे नगरेपछि यसले मिडियामा सधै नै समाचार...
‘किक’ले तोड्न सकेन साहरुख र अामिरको रेकर्ड, पहिलो दिन २६ करोड ब्यापार
गीतकार निलम आम्बुहाङ राइको शब्दमा समावेश एक गीतको म्यूजिक भिडियोको छायांकन भएको छ । सुरेश अधिकारीको संगीत रहेको गीतमा हेमन्त शर्माले आवाज दिएका छन् । गीतको भिडियोलाई मिलन चाम्सले निर्देशन गरेका हुन् । भिडियोमा...
मेस्सीमाथिको छानविन रोक्न अदालतद्वारा अस्वीकार
१३ साउन, काठमाडौं । स्पेनको एक अदालतले कर छलेको आरोपमा बार्सिलोनाका स्टार लिओनल मेस्सीमाथिको छानविन अघि बढाएको छ । मेस्सीमाथि लागेको...
१३ साउन, काठमाडौं । ब्राजिलका नयाँ प्रशिक्षक डुंगाले विश्वकपका क्रममा खेलाडीहरुले देखाएको व्यवहारको आलोचना गरेका छन् । खेलाडीहरु रोएकोमा टिप्पणी गर्दै उनले भनको छन्-हामी मर्द हौं । पुरुष रुँदैनन् लण्डनमा नेपाललाई सात पदक
११ साउन, काठमाडौं । लन्डनको रिभरमिडमा भएको १० औं अन्तर्राष्ट्रिय खुला मैत्रीपूर्ण तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा नेपाली खेलाडीले सात पदक जितेका छन् । टिम प्रशिक्षकका साथै प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा समेत गरेका अशोक मन्त्रीले बनाएको तयारी समिति अवैध : लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ
खबरदार, अब हात मिलाउने होइन, मुड्की जुधाउनुहोस्
साथीभाई भेटघाट हुँदा हात मिलाउने गरिन्छ । तर वैज्ञानिकहरुले भने हात नमिलाउन सुझाव दिँदै मुड्की जुधाउन सल्लाह दिएका छन् ।बेलायतको एवस्र्थ विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुले गरेको...
अमेरिकाको अलाबामाका एक मानिस आफ्नो लिंगको खतना गर्न भन्दै अस्पतालमा भर्ना भए । तर अस्पतालले सर्जरी गरेर उनको लिंग नै काटिदिएपछि उनी इन्तु र...
स्वास्थ्य/जीवनशैली १९ जुलाई : सहवासका लागि सबैभन्दा उत्तम तिथि
सम्भोगका लागि सबैभन्दा राम्रो तिथि कुन होला ? बेलायतमा गरिएको एक अध्ययनले जुलाई महिनाको १९ तारेख सहवासका लागि सबैभन्दा...